1. Uswidi omuhle onemibala Ukunambitheka okucebile Ngezithako ezihlukile Kepha uma zihlanganiswa ndawonye, sikhuluma nge-fudge. Imenyu abantu abaningi abangacabanga ukuthi inzima Futhi awufuni ukuzibeka engcupheni Kepha yicabangele, kuyimenyu elula ukwenziwa. Ayifuni futhi iyinkimbinkimbi Unguphudingi okuzodingeka ukuthi izingane zidle futhi zidle futhi ngaphandle kwesicefe. Ngemuva kwalokho, wozani nizijabulise ndawonye. Ngokubambisana nendlela yokwenza i-fudge engenziwa yinoma ngubani. Empeleni, fudge dessert nge-crispy texture ngaphandle nangaphakathi ethambile Ngenhlanganisela kashokoledi nobisi Kungabizwa ngokuthi ukuthungwa kwe-dessert, ukubonakala kokuthungwa kwe-fudge Lokhu kuzokunikeza ukunambitheka okuthambile futhi okubushelelezi, okufihliwe nge-flavour chocolate emnandi, kanye ne-fudge yangempela, ayikho inqubo eyinkimbinkimbi nezithako. Kuyi-dessert izingane ezithanda futhi zithanda kakhulu. Ngemuva kwalokho, ake silungiselele izithako. Izithako nemishini elula, kepha ukunambitheka kuyamangalisa.
2. UFudge yiluphi uhlobo lwe-dessert ncamashi? Ikani eli-1 lobisi olujiyile olunoshukela (14 oz)
3. Izinkomishi ezi-3 zama-Milk Chocolate Chips
4. Futha ngamafutha omifino noma ibhotela
5. Izitsha ze-ladle
6. Ithileyi yetshokholethi
8. Ungayenza kanjani i-fudge, okumnandi, okunamathelayo • Thela ubisi oluncibilikisiwe esitsheni esilungisiwe. • Bese ufaka ama-Milk Chocolate Chips esitsheni. • Bese ugoqa izithako ndawonye. Ifakwa ku-microwave ekushiseni okuphezulu Kuthatha cishe umzuzu o-1. • Sika iphepha le-Freud kuthileyi olilungiselwe ikhekhe. Bese ufutha uwoyela wemifino noma ugcobe ibhotela elincane elingenawo usawoti. Ukuze ushokoledi unganamatheli ku-freud ukwenza kube lula ukususa.
9. • Bese uthele ushokoledi epanini noma kwisikhunta esilungisiwe. Sebenzisa ukhamba ukusula ubuso bushelelezi. Bese ufaka ingxube efrijini cishe amahora amabili ize iqandiswe ngokuphelele.
10. • Uma ufakwa esiqandisini amahora amabili, susa esikhunjeni. Bese ukhishwa, usikwe ngemigoqo eyisikwele, noma usike izingcezu ezilinganayo lapho ulinikwa ngoshukela oqandayo. Noma ushukela omncane Ukwenza ukunambitheka okumnandi, kubeke ngaphezulu kwe-fudge. Lokhu nje kumnandi. UFudge uwukudla okungalungiselelwa iqembu ngaphambi kwesikhathi. Ngoba ingagcinwa esiqandisini Ikakhulukazi emaphathini anezingane noma njengesitsha esimnandi ngemuva kwesidlo sakusihlwa. Lokho kuthathwa ngokukhonza okulula nokunambitheka okuncane Noma ukuphakela izivakashi ngezikhathi zekhofi nezeti, ezihambisana cishe nazo zonke izinhlobo zeziphuzo ezishisayo Ngaphezu kwalokho, ukukwazi ukuzenzela ngokwakho kungangeza nobumnandi nezinzuzo ezivela ezinhlamvini eziphelele, amantongomane noma izithelo ezomisiwe. Yenze i-fudge eyingqayizivele ezintweni ezizungezile, bese-ke masenze umfudlana esiqandisini sezivakashi noma amaqembu !!